at Friday, December 06, 20136comments:
at Thursday, December 05, 2013 1 comment:
at Monday, December 02, 20132comments:
at Sunday, December 01, 2013 1 comment:
पाइपलाइनका हतियार आउने !!
काठमाडौं । भारतले पाइपलाइनमा रहेका सैनिक सामग्री नेपाललाई तत्काल उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानसेनापति गौरब शमशेर राणालाई भारतीय सेनाध्यक्ष विक्रम सिंहले असोज १४ गते सोमवार सरकारका तर्फबाट यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । भारतले नेपाली सेनालाई एउटा हेलिकोप्टरसमेत उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको छ ।
‘भेटघाट तथा छलफलको क्रममा नेपाली सेनालाई पाईप लाईनमा रहेका सैनिक सामग्रीहरु उपलव्ध गराउन तथा आगामी संविधानसभा निर्वाचनलाई समेत दृष्टिगत गरी आवश्यक पर्ने सवारी साधन लगायतका सामग्रीहरु शिघ्र उपलव्ध गराउने बिषयमा भारतीय पक्षबाट प्रतिवद्धता व्यक्त भएको थियो’ सैनिक सनसम्पर्क निर्देशनालयले सोमवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विगतमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन लिएलगत्तै भारतले नेपाललाई दिने भनेको सैन्य सामग्रीमा रोक लगाएका थियो । २०६२÷०६३को जनआन्दोलनसँगै विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि सेनालाई हतियारसहित सैन्य सामग्री ल्याउने बाटो बन्द भएको थियो ।
एमाओवादी लडाकुहरुको व्यवस्थापन भइसकेपछि सेनालाई विस्तृत शान्ति सम्झौताको बन्धनबाट मुक्त राखिएको थियो । केही समयअघि काठमाडौं आएकी भारतीय विदेश सचिव सुजाथा सिंहले पनि सैन्य सामग्री आपूर्ति गरिदिने बचन दिएकी थिइन् ।
सेनालाई भारतले एड्भान्स लाइट हेलिकोप्टर (एएलएच) उपलब्ध गराउने पनि जनाइएको छ । त्यो हेलिकोप्टरसम्बन्धी तालिमसमेत दिने भारतीय प्रतिवद्धता आएको छ । सो हेलिकोप्टरको मूल्य करिब ६८ लाख अमेरिकी डलर पर्ने जानकारहरु बताउँछन् । भारतले संविधानसभा निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा उपकरणहरु पनि दिने बचन दिएको सैनिक स्रोतले जनाएको छ ।
सोमवार भारतीय सेनापति सिंह र प्रधानसेनापति राणाबीचको भेटमा दुवै पक्षमा उच्च सैन्य अधिकारीहरु सहभागी थिए । राणाको सम्मानमा सिंहले आइतवार राती रात्रीभोज आयोजना गरेका थिए । रात्रीभोजमा भारतका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदूत खगनाथ अधिकारीलगायत सैन्य अधिकारीहरु सहभागी थिए ।
प्रधानसेनापति राणाले सोमवार उत्तराखण्डको पिथौरागढ पुगेर सञ्चालन भइरहेको नेपाल भारत संयुक्त समूह अभ्यास अन्तर्गत ‘कन्सोलिडेसन एक्सरसाईज’को अबलोकन गरेका थिए । उनी भारतीय सेनाको विशेष हेलिकप्टरबाट पिथौरागढ पुगेका थिए । कार्यक्रममा भारतीय समकक्षी सिंह पनि सहभागी थिए । उनीहरुलाई भारतीय सेनाको माउन्टेन डिभिजनका कमाण्डर मेजर जनरल राजीव पन्तले अभ्यास निरीक्षण गरेका थिए ।
प्रधानसेनापतिले दुवै देशका फौजबाट संयुक्त रुपमा प्रदर्शन गरेको विपद् व्यवस्थापन सम्वन्धि अभ्यास, वाधापार सम्वन्धि ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रदर्शनकोे अवलोकन गरेका थिए । संयुक्त अभ्यासमा दुवै सेनाका बटालियन स्तरका सैनिक सहभागी छन् ।
सूर्य किरण नाम दिइएको अभ्यास २०११ देखि दुवै मुलुकबीच पालैपालो हुँदै आएको छ ।
डा. मनोर दिन (एम.डी.) सैयद स्याङजामा जन्मे, उहीँ हुर्किए र पढे । उनी आफूलाई पहाडी मुस्लिम भन्न रुचाउँछन् । स्याङजा, धादिङ, गोर्खा, तनहुँ, पाल्पा, लमजुङ लगायतका स्थानमा उनीहरुको बसोबास छ, कतिपय ठाउँमा बाहुल्य छ, काहिँ सानो संख्या छ । पहाडी मुस्लिम समुदायबाट उच्च शिक्षा लिएका व्यक्तिहरु नगन्य छन्, त्यसमाथि चिकित्सा क्षेत्रमा त बत्ति बालेरै खोज्नुपर्छ उनीहरुलाई । ग्रामीण मध्यम बर्गीय परिवारबाट आएका सैयदले शिक्षण अस्पतालबाट छात्रबृद्धिमा एमडी गरेका छन् । उनले थाहा पाएसम्म उनी नै पहाडी मुस्लिम समुदायका पहिलो चिकित्सक हुन् । ‘पहाडी मुस्लिम समुदायबाट मेडिकल क्षेत्रमा उच्च शिक्षा गर्ने मान्छेहरु छैनन्, सम्भवतः म नै पहिलो हुँ’ शिक्षण अस्पताल परिसरमा भेटिएका सैयद भन्दै थिए, ‘यो क्षेत्रमा पढेर माथि उठ्नुपर्छ भन्ने चेतना हाम्रो समुदायमा छँदैछैन, म त केबल अपबाद हुँ ।’
स्याङजामा उपचार नपाएर मानिसहरु अकालमा मृत्युवरण गरेको दृष्य देखेका ३६ बर्षीय सैयदले जे बाटो रोजे, त्यसबाहेक उनले समाजसेवामा पनि हात हाले । एसिएन श्रोत विकास केन्द्रको नेतृत्व गरेका उनले महिला, वालवालिका, वेरोजगार, स्वास्थ्य,मानव–अधिकारका क्षेत्रमा आपतकालिन सहयोग गर्दै आएका छन् ।
सैयदले प्राथामिक शिक्षा दहथुम मा. वि.वाट उत्तीर्ण गरे । एस.एल.सि. चाहि पायोनिअर इङ्लिस स्कुल वालिङ्वाट गरे । अमृत साइन्स क्याम्पसवाट आइएससी गरेपछि उनी चिकित्सक बन्ने धुनमा भौँतारिए । ‘पहाडी मुस्लिम युवाहरुमा वैदेशिक रोजगार नै एक मात्र विकल्प मानिन्छ, अरब जाने, पैसा कमाउने, घरजम गर्ने संस्कार हामीकहा छ’ उनले सुनाए, ‘ मैले परिवार र शुभेच्छुकको सल्लाहमा चिकित्सा अध्ययनको बाटो. रोजेँ ।’ उनले शुरुमा पुर्ण छात्रबृतिमा पाकिस्तानवाट एम.बि.बि.एस. अध्ययन गरे । फर्केर आएपछि २०६२ सालदेखि वीर अस्पतालमा सेवा गरे । त्यसक्रममा उनले वैतडी, अछाम, धादिङ, दोलखा जुम्ला, सप्तरी, सुनसरी गएर निशुल्क स्वास्थ्य शिविर चलाए । उनले त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जबाट स्त्री तथा प्रसुती विषयमा पुर्न छात्रबृति पाएर एम.डी. सकेका छन् र राजधानीका नाम चलेका अस्पतालहरुमा सेवारत छन् ।
चिकित्सा शास्त्र पढेपछि कसरी आय आर्जन गर्ने भन्ने धुनमा हिँडेकाहरुप्रति सैयद सहमत छैनन् । उनको बिचारमा यो पेशा पैसा कमाउने मात्र होइन, समाजसेवा गर्ने हो । ‘हामीलाई सामान्यतया पैसाको अभाव हुँदैन, अनि किन पैसाकै पछाडि मरिहत्ते गर्ने ?’ उनी भन्छन्, ‘निमुखा, गरिब बस्तीमा गएर उनीहरुलाई स्वास्थ्य सेवा दिन सकियोस् भन्ने मेरो चाहना छ । कर्मक्षेत्रबाट आर्जन गर्ने पैसाले मलाई पुगेको छ । तर समाजमा केही गरौं भन्ने मेरो रुची छ ।’
चिकित्साशास्त्र पढ्दै गर्दा उनलाई बेग्लै हिसाबले समाजसेवा गर्ने अबसर जु¥यो । अध्ययन भ्रमणका क्रममा इन्डोनेशिया पुगेका बेला उनलाई एउटा अफर आयो एशियन रिसोर्सेस फाउन्डेसनमार्फत् सेवा क्षेत्रमा हात हाल्ने । ‘मैले सहजै स्वीकार गरेँ किनभने मेरो जीवनको लक्ष्य समाजसेवा नै थियो’ सैयदले भने । सो संस्थाको उनी अध्यक्ष हुन् । उनीहरुले राजधानीसहित पाँच जिल्लाका गरीव विद्यार्थीलाई सहयोग गर्दै आएका छन् । काठमाडौंको वाणभन्ज्याङ, स्याङ्जाको दहथूम स्कूल, कपिलबस्तु, नवलपरासी र रुपन्देहीमा उनीहरुले सरकारी स्कूलका २५÷२५ जना विद्यार्थीलाई कपडा, कापी, जुत्ता र स्वीटर दिँदै आएका छन् । ‘अत्यन्तै सीमान्तिकृत र गरीब हरुलाई हामीले सहयोग वितरण गर्दै आएका छौँ’ उनले भने ।
उनको अगुवाईमा सन् २००७ मा नारायणी वाढी पिडीत ६१ घर परिवारका लागि राहात वितरण र स्वास्थ्य परीक्षण गरियो । २००८ अगष्ट मा अन्तराष्ट्रिय स्तरको शान्तिका लागि युवा नामक ४ दिने सम्मेलन आयोजना गरेको सो संस्थाले जोर्डन, इण्डिया,इरान, बङ्लादेश ,पाकिस्तानबाट युवाहरु जम्मा पा¥यो र शाीन्तको खाका प्रस्तुत ग¥यो । सन् २००८ सेप्टेम्बर मा कोशी वाढी पिडीतका लागि स्वास्थ्यशिविर आयोजना भयो र २०० घर परिवारलाई राहत वितरण भयो । सन् २०१२ डिसेम्बरमा फिलिपिन्सको पाब्लो नामक हावाहुरीबाट पिडितका लागि आपत्कालिन स्वास्थ्य शिविर तथा राहत वितरण कार्यक्रममा सैयद सहभागी भए । ‘त्यहाँका ५ वटा गाउँमा एक साता बस्दा पाँच सय विरामीहरुको जाँच ग¥यौँ’ उनले भने । उनी भारत पाकिस्तान बंङ्लादेश, श्रीलङ्का, साउदी अरब, कतार, दुबई, इन्डोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपिन्स, थाइल्याड का विभिन्न ठाउमा गएर स्वाथ्य परिक्षण र समाजसेवाका काम गरिसकेका छन् । ‘म समाजसेवामा जीवन समर्पण गर्न चाहन्छु, ’ उनले भने । दुर्गम भेगमा बसेका र अरब मुलुकमा बसेर भविश्यको खोजीमा लागेका पहाडी मुस्लिमसहित बिपन्न बर्गका युवालाई सकारात्मक पाठ सिकाउन चाहन्छन् । उनलाई नजिकबाट चिनेका पत्रकार पुष्पलाल पाण्डे भन्छन्, ‘सैयदले लिएको बाटोले पहाडी मुस्लिम समुदायमा नयाँ शिक्षा दिएको छ । उनले अहिले के के गरे भन्दा पनि उनले रोजेको बाटो ग्रामीण भेगका सबै समुदायका लागि प्रेरणा हुनुपर्छ ।’
सैयद धार्मिक वा जातीय राजनीतिको पक्षमा छैनन् । मुस्लिमका नाममा भएका राजनीतिले युवालाई सकारात्मक बाटोमा लैजान प्रेरणा नदिएको बरु खाडी मुलुकतिर जान बाध्य बनाएको उनको विश्लेषण छ । ‘यहाँ सवाल पहाडी, मधेशी, मुस्लिम, हिन्दुको होइन, पिछडिएका गरिब समुदायलाई माथि उठाउनु पर्छ’ सैयद भन्छन्, ‘हाम्रो मुलुकमा जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक सद्भाव छ । युवाहरुलाई सही बाटोमा अघि बढाएर सक्षम बनाउनेतिर सबैको ध्यान जानुपर्छ । हामीले सबैको उन्नति हुने बाटो रोज्नुपर्छ र त्यसमा युवालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।’ सैयदको भावि दिन समाजसेवामै समर्पित रहोस्, हार्दिक शुभकामना ।
Labels: फिचर, समाचार
काठमाडौं (नेपालडोर) । सार्क मुलुकहरूबीच ‘एकल भिसा’ लागू हुन सक्ने सम्भाव्यताबारे छलफल सुरु भएको छ । साउन २९ र ३० गते सार्क राष्ट्रका अध्यागमन विभाग प्रमुख र गृहमन्त्रालयका उच्च अधिकारीबीच भएकोे बैठकमा एकल भिसा प्रणालीबारे छलफल भएको हो । स्रोतका अनुसार आठवटै मुलुकबीच आवत जावत गर्न एकै राहदानी र भिसा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने विषयमा बैठकमा सहभागी सबैको एकमत थियो । बैठकमा गृहमन्त्रालयका सहसचिव चूडामणी शर्माले नेपालको नेतृत्व गरेका थिए । नेपालले नै बैठकको अध्यक्षता गरेको थियो ।
नेपाल, पाकिस्तान, भारत, चीन, माल्दिभ्स, श्रीलंका, भुटान र अफगानिस्तानमा एकल भिसा प्रणाली अपनाउने विषयमा निकट भविष्यमा हुने मन्त्रीस्तरीय बैठकमा पनि छलफल हुने बुझिएको छ । गृहमन्त्रालयको सीमा, प्रहरी र अध्यागमन महाशाखा प्रमुख रहेका सहसचिव शर्माले ‘युरोपियन युनियनमा जस्तै सार्क राष्ट्रबीच एकै राहदानी र भिसा बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
सो बैठकमा सार्कमा एकै भिसा प्रणाली विकास गर्ने विषयमा सामान्य छलफल भए पनि अब सार्क राष्ट्रका मन्त्रीस्तरीय बैठकमा यसबारे एजेन्डा नै पेश हुनेछ । मन्त्रीस्तरीय बैठकले आवश्यकता महसुस गरेमा यो व्यवस्था कार्यान्वयनको पहल सुरु हुने गृहस्रोतले बतायो ।
एकै राहदानी र भिसा भए सार्कका कुनै पनि देशमा आएका पर्यटकले सार्क राष्ट्रभर आवत जावत गर्न पाउनेछन् । एकल भिसा प्रणालीअनुसार सार्क राष्ट्रभरका नागरिकले सार्कभित्रकै कुनै एक देश प्रवेशको अनुमति लिए अन्य मुलुकमा पनि प्रवेश पाउनेछन् । एउटा मुलुकले लिएको भिसा दस्तुर बाँडफाँड हुने चलन युरोपियन युनियन सम्बद्ध मुलुकमा छ ।
सोही बैठकमा सार्क राष्ट्रबीच सूचना आदानप्रदान र व्यवस्थित बनाउनेलगायत गैरकानुनी गतिविधिको रोकथामका बारेमा पनि छलफल भएको थियो । ‘सार्क राष्ट्रबीच अपराधीहरू पस्ने, बस्ने र उम्कन नपाउने संरचना विकास गर्ने सहमति भएको छ,’ गृहका सहसचिव शर्माले भने, ‘यस्ता सहमति आगामी सार्क राष्ट्रको मन्त्रीस्तरीय बैठकले निर्णय गरेपछि लागू हुन्छ ।’
सार्कका सम्मेलनहरूमा पनि एकल भिसाको प्रणालीको प्रसंग चल्ने गरेको छ । तर, कार्यान्वयन हालसम्म भएको छैन ।